Health – 8 Kbiz
नेपालको चम्ल्याहा बच्चाको जन्म दिने पहिलो महिला
17/01/2020 kcLeaveaComment on नेपालको चम्ल्याहा बच्चाको जन्म दिने पहिलो महिला
पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा बिहीबार चम्ल्याहा बच्चाको जन्म भएको छ। स्याङ्जा पुतलीबजार नगरपालिकाकी २६ वर्षीया सुनीता (पौडेल) प्रधानले चम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी हुन्। शल्यक्रियामार्फत जन्मेका तीन छोरी, एक छोराको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका डा.महेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वको टोलीले शल्याक्रिया गरी बच्चा जन्माएको हो। नवजात शिशुमाध्ये पहिलो छोरीको तौल १.५ किलो ग्राम, दोस्रो छोरा […]
बिहेपछि महिलामा के के परिवर्तन देखिन्छन् त । मनपरे सक्दो share गर्नुहोस ।
06/01/2020 kcLeaveaComment on बिहेपछि महिलामा के के परिवर्तन देखिन्छन् त । मनपरे सक्दो share गर्नुहोस ।
विवाहपछि महिलामा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा भिन्न परिवर्तन आउने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । विवाहपछि श्रीमान्सँग शारीरिक सम्बन्ध रहन्छ । यसकारण शरीर रिप्रोडक्सनका लागि तयार हुन्छ । यस क्रममा महिलाको शरीरमा एस्ट्रोजनलगायतका कैयौँ हर्मोनको मात्रा बढ्न जान्छ । यस्तो हर्मोनले यस्ता शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन देखिने गर्छ । -महिलामा बढ्ने हर्मोनले भोक बढ्ने, फ्याट जम्मा हुने, तौल बढ्ने गर्छ । […]
न्यूनतम तापक्रम १ डिग्री सेल्सियस, चिसो हावाका कारण देशभर अत्याधिक जाडो
29/12/2019 kcLeaveaComment on न्यूनतम तापक्रम १ डिग्री सेल्सियस, चिसो हावाका कारण देशभर अत्याधिक जाडो
बदली तथा वर्षा गराउने मौसमी प्रणालीको प्रभाव नेपालमा नरहेपनि चिसो गराउने प्रणाली भने सक्रिय रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशैभरि केही दिनयता लगातार जाडो बढेको छ । यसको प्रमुख कारण नेपालमाथिबाट जेट स्ट्रिम गइरहनु रहेको मौसमविद समिर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । त्यसकै कारण उत्तर पश्चिमी क्षेत्रबाट नेपाल तर्फ चिसो हावा […]
नतिजासहित हेर्नु होस् त्रिविद्धारा स्नातक तहको नतिजा प्रकाशित
28/12/2019 kcLeaveaComment on नतिजासहित हेर्नु होस् त्रिविद्धारा स्नातक तहको नतिजा प्रकाशित
। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तह तेस्रो बर्षको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । त्रिविले २०७६ जेठ तथा असार महिनामा संचालित चार बर्षे बिएड तेस्रो बर्षको परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको हो । नतिजा हेर्नको लागि नेपाल टेलिकमको नम्बरबाट 4BED लेखि एउटा स्पेस दिएर आफ्नो सिम्बोल नम्बर लेखि 33624 मा एसएमएस पठाउनु पर्ने छ । त्यसै गरि […]
को हुन १७ मिनेटमा ११ बच्चा जन्माउने महिला
27/12/2019 kcLeaveaComment on को हुन १७ मिनेटमा ११ बच्चा जन्माउने महिला
यो विश्वमा रहस्यै रहस्यै छ । रहस्य सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । यस्तै घटना सन् २०१२ मा भएको थियो । मारिया हर्नानडेस नामकी महिलाले १७ मिनेटमा ११ बच्चाको जन्म दिएकी थिइन् । मारिया भारतको सुरथकी बासिन्दा हुन् । उनैले ११ बच्चालाई जन्म दिएकी हुन् । ११ बच्चाहरु सबै स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त रहे । यी महिलाले […]
27/12/2019 kcLeaveaComment on उपसभामुखले राजीनामा दिने, सभामुखमा कसको छ सम्भावना हेर्नुहोस
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बिहीबार राजीनामा दिने तयारी गरेकी छन्। सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिन लागेकी हुन्। संसद् सचिवालयले पुस १४ गते सभामुख निर्वाचनको तालिका बनाएको छ। सत्तारुढ नेकपाले सभामुख लिन तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउन लागेको हो। सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नेकपाले उपसभामुख छाड्न लागेको हो। उपसभामुख […]
१० रुपैयाँ किलो प्याज बेच्ने पक्राउ?
26/12/2019 26/12/2019 kcLeaveaComment on १० रुपैयाँ किलो प्याज बेच्ने पक्राउ?
भारतमा चोरी गरेको प्याज सस्तो मूल्यमा बेच्ने २ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा जय जाटव र जितु वाल्मिकी रहेका छन् । भारतिय मिडियाका अनुसार प्याजको मूल्य आकाशिएको बेला चोरी गरेको प्याज १० रुपैयाँ किलो प्याज बेचिरहेका दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो । सस्तो प्याज बेचिरहेको हल्ला चलेपछि सस्तोमा किन्न मानिसहरुको भीड जम्मा भयो […]
कसले गर्यो चितवनमा बाघको सिकार ?
26/12/2019 kcLeaveaComment on कसले गर्यो चितवनमा बाघको सिकार ?
NEPAL–चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको सामुदायिक वनमा वयस्क पाटेबाघ मृत फेला परेको छ । निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने पर्साको ठोरी गाँउपालिका–३ वेदघारी सामुदायिक वनमा बुधबार बाघ मृत फेला परेको हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेतीले बाघ जुधेर मरेको प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त गरिएको बताए । उनले निकुञ्जबाट गएको चिकित्सकसहितको टोलीले बाघ कसरामा ल्याउने जानकारी दिए। घाँस […]
कसले गरे भारतमा बेचिन लागेका ३१ महिलाको उद्धार
26/12/2019 26/12/2019 kcLeaveaComment on कसले गरे भारतमा बेचिन लागेका ३१ महिलाको उद्धार
NEPAL– चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध सक्रिय भनिएको माइती नेपाल नामक संस्थाले एक बर्षको अवधिमा वीरगञ्ज नाकाबाट ३१ महिलालाई उद्धार गरेको छ। २०१९ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्ममा माइती नेपाल वीरगन्जले दलालहरुको चंगुलमा परि भारतमा बेचिएका ३१ जना महिलालाई नेपाल फर्काएको हो। ती महिलाहरुलाई दिल्ली, कोलकत्ता, मोतिहारी, सुगौली, रामगढवा र रक्सौललगायतका ठाउँबाट उद्दार गरिएको माइती नेपाल वीरगन्ज शाखाकी प्रमुख […]